Dugsi kasta oo hoose wuxuu leeyahay labadaba barnaamij Ingiriis ah iyo barnaamij luuqad barasho, taas oo fursad u siisa carruurta ku hadasha Ingiriisiga inay si fiican ugu hadlaan luqadda labaad. Afar ka mid ah dugsiyadeennu waxay bixiyaan Bilowga Isbaanishka, laba kalena waxay bixisaa Imtixaanka Shiinaha. Qoysasku waxay doortaan midkood Luuqadda Luuqadda ama barnaamijka Ingiriisiga oo ka bilaabanaya Xanaanada. Qiyaastii kalabar qoysaskeennu waxay doortaan Ingiriis badhna waxay doortaan Isbaanish ama Shiine. Ardayda galeysa xanaanada kadib waxay iska qori karaan oo keliya barnaamijka Ingiriiska. Fasal luqadeedka dugsiga kadib kadib waxaa lagu bixiyaa iskuul kasta wuxuuna u furan yahay ardayda ku qoran barnaamijkeena Ingiriisiga. Barnaamijkeena gaarka ah ee iskuulka gudihiisa-iskuulka wuxuu keenaa dhaqan laba-luqadle hodan ku ah midkastoo iskuuladeena wuxuuna sare uqaadaa wacyiga aduunka ee dhamaan ardayda.
Inta lagu jiro dugsiga hoose ee Minnetonka, carruurtu waxay sidoo kale leeyihiin barasho:
Muusikada, Kooxda Fanaaniinta, Kooxda Fanaaniinta, Kooxda Orchestra
Maado kasta waxay ka hadlaysaa waxyaabaha ku saleysan heerarka iyadoo xoogga la saarayo kobcinta xirfadaha Qarniga 21aad ee ardayga sida hal-abuurka, iskaashiga, wada xiriirka, fikirka muhiimka ah iyo hal-abuurnimada.
Barashada kaladuwan waxay muhiim u tahay shakhsiyeynta waxbarashada iyo la kulanka carruurta “meesha ay joogaan” si looga caawiyo inay gaaraan heerka xiga. Dhammaan macallimiinta fasalkeennu waxay adeegsadaan habab kala duwan si ay uga jawaabaan baahiyaha waxbarasho ee shakhsiga ah, xiisaha iyo u diyaarsanaanta ardayda.
Hawlaha kobcinta waxaa la siiyaa dugsiga ka hor iyo ka dib, iyo dhammaan ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka qaybgalaan. Hawlaha qaarkood waxay soconayaan dhowr toddobaad, halka kuwa kalena ay socdaan sannadka oo dhan. Ka qeyb qaadashadu maahan oo kaliya hab fiican oo saaxiib lagu yeesho, laakiin waxay horumarisaa aasaaska howlaha dugsiga dhexe iyo howlaha dugsiga sare. Cilmi baaris ayaa muujisay in ardayda da'da weyn ee ku lug leh nashaadaadka waxqabadyada iskuulka ka baxsan fasalka ay waxqabad fiican ku qabtaan dugsiga.